KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 22/04/2012
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:00 AM No comments:
လယ်သိမ်းမယ်၊ အိမ်ကိုဝရမ်းကပ်မယ်၊ လူကို ထောင်ချမယ်၊
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကနေပြီး ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ အတွက် တောင်သူ လယ်သမားတွေကို ထုတ်ချေးထားတဲ့ ချေးငွေကို ၂ ရက် အတွင်း ပြန်မဆပ်နိုင်ရင် လယ်ယာမြေသိမ်းယူတာ ၊ လယ်ပိုင်ရှင်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချတာ လုပ်မယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုတာကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း သုံးခွမြို့နယ်က ချေးငွေမဆပ်နိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံတောင်သူတွေဟာ ထောင်ချခံရမယ့် အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စပါးနဲ့ပဲ တွေပျက်စီးခဲ့လို့ တောင်သူတွေ ငွေပြန်မပေါ်ပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့သလို စိုက်ဘဏ်က ချေးငွေတွေပါ ပြန်ဆပ်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေချိန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက မနက်ဖြန် ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား မပေးရင် လယ်မြေတွေ သိမ်းဆည်းပြီး လယ်ပိုင်ရှင်တွေကိုပါ ထောင်ချမယ် ဆိုပြီး အသိပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ သဲကုန်းတူးမြောင်းကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ "ဒီနှစ်က ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်တော့ သီးနှံတွေ ဆုံးတယ်၊ စပါးက မထွက်ဘူးဗျား၊ ပဲကြတော့လည်း ပိုးဖျက်တယ်၊ အဲ့ဒီအတွက် ကျနော်တို့ ကြပ်တည်းမှုတွေ ဖြစ်တယ်၊ အခု အဲ့ဒါကို ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ၂၅ ရက်နေ့ သုံးခွက ဒုမန်နေဂျာ ဦးတင်ဝင်း ရယ် နောက် တိုင်းက လူကြီးလို့ ပြောတာပဲ နာမည်တော့ မသိဘူး၊ ကျေးရွာ ဥက္ကဌ နဲ့ပဲ လာကြတာ၊ မဆပ်နိုင်လို့ရှိရင် သူက လယ်သိမ်းမယ်၊ အိမ်ကိုဝရမ်းကပ်မယ်၊ လူကို ထောင်ချမယ်၊ နောက်ဆုံးက နက်ဖန်ခါနောက်ဆုံးပဲ။ လယ်သမားတွေက အယောက် ၂၀ ရှိတယ် ကျနော်တို့ ရွာမှာတင်။" သုံးခွမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတောင်သူတွေကို အတိုးငွေ တစ်ကျပ်ခွဲနှုန်းနဲ့ လယ်တစ်ဧက လေးသောင်းကျပ်စီ မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်က ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သဲကုန်းတူးမြောင်းကျေးရွာနဲ့ တဆက်တည်းရှိ အဖောင်ကျေးရွာကိုလည်း ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့က အလားတူ လာရောက်သတိပေးထားတဲ့ အတွက် ချေးငွေ ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ ဒေသခံ လယ်သမား တွေ စိုးရိမ်နေကြကြောင်း အဲ့ဒီရွာမှာ သတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးက မိန့်ကြားပါတယ်။ "ဦးဇင်းတို့ အဖောင်ရွာကိုလည်း ဒီလိုပဲ အချိန်ကလေးကလည်း ၂ ရက်ပဲ သူက ကန့်သတ်ပြီး တောင်းတယ်၊ လယ်သမားတွေက နေလို့ မရတော့ဘူး။ ငါတို့များ ရဲလာဖမ်းတာလားဆိုပြီး အကြောက်တရားကြောင့် မိသားစုတွေက အကုန်လုံး စိုးရိမ်သောကတွေ ရောက်နေကြပြီ။" ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးခွမြို့နယ်က စိုက်ဘဏ်ရုံးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဘဏ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။ "ဒီငွေဟာ ဒါ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေလေ၊ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေ မဆုံးရှုံးဖို့ လုပ်ရတဲ့ ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် ဒီ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေက ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လေ၊ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေကို ပေးတဲ့နေရာမှာ စပါးပဲ ပျက်ပျက် မိုးပဲဖျက်ဖျက် ပေါ့ဗျား။ ကျနော်တို့က ငွေပေးတာ ငွေပြန်ဆပ်ရင် ပြီးတာပဲ။ အဲ သူတို့က သတ်မှတ်တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ပြန်ဆပ်ရင် ဒီကိစ္စက ပြီးတာပဲကို အချိန်တန်ရင် ပြန်ထုတ်ပေးပေါ့၊ ဒါ ကျနော်တို့ ဘဏ်ရဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုပါပဲ။" သုံးခွမြို့နယ်အတွင်းမှာ မနှောသုခစပါးနဲ့ ရွှေဝါထွန်းစပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဦးရေ တစ်သောင်း သုံးထောင်ကျော် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကြောင့် ကျောက်ကြီးလူထု သွားလာမှု လွတ်လပ်လာ
ဧပြီလ ၂၆ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ (ကေအိုင်စီ)
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှစ၍ ယနေ့အထိ
၎င်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လူထုများမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ မရှိတော့ဘဲ လွတ်လပ်စွာ သွားလာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“လူထုတွေကတော့ အခုဆို သွားလာတာလည်း အရင်လို လက်မှတ်ရေးစရာ မလိုတော့ဘူး။ အစစ်အဆေးလည်း မရှိတော့ဘူး”ဟု KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ဥက္ကဌ ပဒိုစောနဲထူးဗျိုင်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများမှ ဒေသခံများသည် ယခင်က တနေရာနှင့် တနေရာ သွားလာရန်အတွက် လူတစ်ဦးလျှင် လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ကျပ်ငွေ ၅၀၀ပေး၍ သွားလာခဲ့ရသလို မိမိတို့ ၀ယ်ယူသယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများလည်း စစ်ဆေး သိမ်းဆည်းခံရကြောင်း ပဒိုနဲထူးဗျိုင်းက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
သူက “အရင်ကဆို ဓာတ်ခဲတွေ၊ ဓာတ်မီးတွေ ၀ယ်လာရင် အသိမ်းခံရတယ်။ သဘောက ဖောက်ခွဲရေးကိစ္စတွေမှာ ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေ သုံးတယ်ဆိုပြီး အသိမ်းခံရတာလေ။ အခုတော့ ဘာမှမလိုတော့ဘူး။ သွားလာရ၊ သယ်ဆောင်ရ လွတ်လပ်သွားပြီ။”ဟု ဆိုသည်။
ဧပြီလ ၉ရက်နေ့က ကျောက်ကြီးမြို့ရှိ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးကို KNU ဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ကာ သွားလာရေး အသုံးပြုနိုင် ရန် Grand Tiger ကားတစ်စီး ပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်ထိ KNU ဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ်သာ ထားရှိလျှက်ရှိကြောင်း ပဒိုနဲထူးဗျိုင်း က ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဆက်ဆံရေးရုံး၏ ယာယီတာဝန်ခံအဖြစ် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့-KNLA တပ်ရင်း(၉)မှ ဗိုလ်ကြီးအိုင်း ဇက်နှင့် တပ်ရင်း(၈)မှ ဒုခွဲမှူး ဗိုလ်ထိုဆာအား တာဝန်ပေးအပ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
အမည်မဖော်လိုသူ ကရင်ဒေသခံတစ်ဦးက “လက်ရှိမှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတော်လေးတော့ သတိ ထားရအုံးမှာပဲ။ အခုလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းက အတော်အရေးကြီးတယ်။ မတော်လို့ ပျက်စီးသွားရင် ကျနော်တို့လူထုတွေပဲ ဒုက္ခ အခက်အခဲ အရင် ရင်ဆိုင်ရမှာ။ ဒါကြောင့်လည်း စိုးရိမ်နေရသေးတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်နေကြသည့် ဒေသခံများအနက် ၇၅ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး အများစုမှာ ကျဘမ်းအ လုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။
မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စွပ်စွဲမှုကို တာဝန်ခံရန် ထိုင်းအစိုးရကို ဒီကေဘီအေ တုန့်ပြန်
ဧပြီလ ၂၆ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်းအစိုးရမှ တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-DKBA ကလို့ထူးဘော၏ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ် (ဗိုလ်နှုတ်ခမ်း မွှေး) အား မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် စွပ်စွဲကြေညာမှုအပေါ် ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါက ထုတ်ပြန်သူကိုယ်တိုင် တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း DKBA မှ ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယမန်နေ့ညက ကေအိုင်စီထံ ရောက်ရှိလာသည့် DKBA ကလို့ထူးဘော၏ သဘောထားကြေညာချက်ထဲတွင် ဧပြီလ ၂၀ရက်နေ့က ထိုင်း အမှတ်(၃) ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်လိုက်သော ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလိုရှိသူ မူးယစ်ရာဇာ ၂၅ဦးထဲတွင် ဒီကေဘီအေ ကလို့ထူးဘော စစ်ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ် ပါဝင်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဒု-၀န်ကြီးချုပ် ချလိမ့်ယူဘမ်းရုန်းကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်းခဲ့မှုအပေါ် ထိုသို့ တုန့်ပြန် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီကေဘီအေ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ကြီးစောကိုမျိုးက “ထိုင်းအစိုးရက အကြောင်းအရာရှိလို့ ထုတ်ပြန်တယ်လို့ ယူဆ တယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် မဟုတ်ပါဘူးလို့ တုန့်ပြန်ရမှာပဲ။ ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ကျနော်တို့ လုပ် ဆောင်သွားမယ်။”ဟု ပြောသည်။ ထိုင်းအစိုးရ၏ စွပ်စွဲချက်သည် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဂုဏ် သိက္ခာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ထိခိုက်နေသည့်အပေါ် ပြန်လည် ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။ DKBA ကြေညာချက်တွင် ၎င်းတို့ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်ကြောင်း ယူဆပါက ဒု-၀န်ကြီးချုပ် ချလိမ့်ယူဘမ်းရုန်းအနေဖြင့် DKBA အခြေစိုက်ရာ မည်သည့်နေရာမဆို ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ကြောင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စ ထုတ်ဖော်တွေ့ရှိပါက မည်သည့်တရားရုံး၊ ခုံရုံး မဆို တက်ရောက်ရင်ဆိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပါရှိသည်။ တဆက်တည်း၌ပင် လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စွပ်စွဲပြောဆိုမည်ဆိုပါက “ဘယ်သူက ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ တိကျခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားများ ပြသဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆကြောင်း” ဒီကေဘီအေ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုင်း ဒု-၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ယခု ဧပြီလ ၃၀ရက်နောက်ဆုံးထားကာ ၎င်းတို့ဒေသကို လာရောက်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ပါ ကြောင်း၊ လာရောက်ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိပါက နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ ထိုင်းအစိုးရအား ဆက်လက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း DKBA က ပြောဆိုထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့က DKBA သည် မြန်မာအစိုးရနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် သဘောတူညီချက်အပိုဒ် (၅)အရ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အချက်ကို သဘောတူထားသည်ဟု ၎င်းတို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။ ထိုင်းအစိုးရက ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်အား ဆုလာဒ်ငွေထုတ်၍ ဖမ်းဆီးရန် ကြေညာထားသည့်အပေါ် ကေအိုင်စီမှ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလား ပွယ်အား တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ရန် ယနေ့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားဆက်သွယ်သော်လည်း မအားလပ်မှုများရှိသည်ဟူသော အကြောင်းပြ ချက်များကြောင့် ပြန်လည်ဖြေကြားမှုကို မရရှိခဲ့ပေ။ ထိုင်းအစိုးရက ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၂သန်းဖြင့် ဖမ်းဆီးရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်ကူးမှု၌ ထိပ်တန်းစာ ရင်း ပါဝင်သူ ၂၅ဦး၏ အမည်ကို ထိုင်းအစိုးရ၏ Office of the Narcotics Control Board -ONCB အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သား ၃ဦးဖြစ်သည့် ရွှေတြိဂံဒေသမှ နော်ခမ်း၊ တာချီလိတ် နမ့်ပုံပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ယီဆေးနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်တို့ ပါဝင်ခဲ့ သည်။ ဒီကေဘီအေသည် ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU မှ ခွဲထွက်ကာ စစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့သည့် ကရင်လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား စစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည် ကို ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ် ဦးဆောင်သည့် ကလို့ထူးဘောတပ်ဖွဲ့က ဆန့်ကျင်၍ အစိုးရနှင့် တနှစ်ကြာ ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် အသစ်တက်လာသည့် မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:46 AM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံက အလိုရှိတဲ့ ဗမာပြည်သား Wanted သုံးယောက်ထဲမှ တစ်ယောက်တော့သွားပြီ။ အကြားထဲက DKBA ဗိုလ်မှူးချူပ် စောလါးဘွယ် နာမည်လည်းပါသည်။ ဒီကိစ္စ တီးလားဘွယ်တို့ လျော့မတွဲနဲ့သတိအမြဲရှိပါ။ ခင်ဗျားတို့ လုပ်တာ မလုပ်တာ ကျနော်တို့ မသိဘူး စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူး.. တာပေမယ့် ကရင်ကို ထိပါးလာရင် ကျနော်တို့ လည်း နာတယ်။ ကိုယ့်လှုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်ကြပါ။ စေတနာ.. မေတ္တာဖြင့်.....
ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလိုရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်းကို လာအိုစစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ထိုင်း ရုပ် သံ သတင်းဌာန Chanel3နှင့် ထိုင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်း Chanel3သတင်းဌာနတွင် ဖော်ပြထားသော နော်ခမ်း (ဓာတ်ပုံ - krobkruakao.com)
လာအို အာဏာပိုင်များက မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်းကို ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်း ထိုင်း အာဏာပိုင်များထံ အကြောင်းကြားခဲ့ သည့် အတွက် သွားရောက်စစ်ဆေးနေကြောင်း အဆိုပါ သတင်းဌာနများတွင် ရေးသားထားသည်။ နော်ခမ်းကို လက်ရ ဖမ်းဆီးမိခြင်းလော၊ အသေဖမ်းဆီး မိခြင်းလော ဆိုသည်မှာ မရှင်းလင်းသေးပေ။
မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်မြို့မှ အစိုးရ အရာရှိတဦးကလည်း မူးယစ်ရာဇာနော်ခမ်း၏ အဖွဲ့ဝင် လေးဦးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက လာအိုနိုင်ငံဘက်ခြမ်းတွင် ဖမ်းမိသည်ဟု သိရကြောင်း ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၂၀ရက်နေ့က မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်းအား ထိုင်းနိုင်ငံမူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံး(Office of the Narcotics Control Board – ONCB) က ဆုငွေ ထိုင်းဘတ် ၂ သန်း (ဒေါ်လာ ၆၄၀၀၀ ခန့်)ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထိုသို့ ဆုငွေထုတ်ပြီးနောက် နော်ခမ်း၏ အဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးသည် မြန်မာအစိုးရထံသို့ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မူးယစ်ရာဇာနော်ခမ်းနှင့် အဖွဲ့သည် မြန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်များ ထိစပ်နေသည့် ရွှေကြိဂံဒေသတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး
ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်နေပြီး မဲခေါင်မြစ်အတွင်းရှိ ကုန်သင်္ဘောများနှင့် ခရီးသည်တင်ရေယာဉ်များကို စီးနင်းတိုက်ခိုက်ကာ ပြန်ပေးငွေ တောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလက မဲခေါင်မြစ်အတွင်းသွားလာနေသည့် တရုတ်ကုန်တင်သင်္ဘောကို ၀င်ရောက်စီးနင်းပြီး သင်္ဘောသားများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့ရာတွင် မူးယစ်ရာဇာနော်ခမ်းနှင့် အဖွဲ့က ပြုလုပ်ကြောင်း ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ စွပ်စွဲမှုများလည်း ထွက် ပေါ်ခဲ့သည်။
မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် လာအို နိုင်ငံများက အလိုရှိနေသူ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား တဦးဖြစ်သည့် နော်ခမ်းသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် လက်နက်ချခဲ့သော ဦးခွန်ဆာ ခေါင်းဆာင်သည့် မော်ထိုင်း တပ်မတော်(MTA) တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လက်နက်ကိုင်ပြီး ရွှေတြိဂံနယ်မြေ၌ ပြန်လည် လှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်း၊ သူ၏တပ်ဖွဲ့ကို လားဟူ၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သွယ်မှုများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံက အလိုရှိနေသူများစာရင်းတွင် မူးယစ်ရာဇာနော်ခမ်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ် သည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်(DKBA)မှ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး ခေါ် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ် နှင့် ယင်းဆေး တို့လည်း ပါဝင်သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:45 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:41 AM No comments:
Local KNLA meet with Burmese Army 11 April 2012 ကွယ်ကလူသတင်းမှ
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:34 AM No comments:
Minister U Aung Min discuss land confiscastion issue in Karenni
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:52 AM No comments:
တတိယနိုင်ငံ ထွက်နိုင်ရန် နို့ဖိုးဒုက္ခသည် ၁၀၀ခန့် တောင်းဆိုဆန္ဒပြ
Submitted by admin on Wednesday, 25 April 2012--
ဧပြီလ ၂၅ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်၊ အုန်းဖန်မြို့နယ် နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး-UNHCR အရှေ့၌ ဒုက္ခသည် ၁၀၀ဦးခန့်က ယူအဲန်ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပြီး တတိယနိုင်ငံထွက် နိုင်ရန် ယနေ့ မနက် ၉နာရီခွဲမှ မွန်းလွဲ ၁နာရီအထိ တောင်းဆိုဆန္ဒ ပြခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒပြဒုက္ခသည်များသည် အများအားဖြင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်မှစ၍ နို့ဖိုးစခန်းရှိ ရပ်ကွက်(၁၆)တွင် ရောက်ရှိလာသူများဖြစ်ပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ် စပ်အခြေစိုက် ဒုက္ခသည်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနေသည့် (TBBC)မှ ပေးသော ရိက္ခာလက်မှတ် ရရှိထားသူများဖြစ်သော် လည်း UNHCR မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မရှိသေးသည့်အတွက် ပြုလုပ်ပေးရန် ယခုလို ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
နို့ဖိုးစခန်းအတွင်းရေးမှူး စောသူးလေဒို့စိုးက ဆန္ဒပြသူများသည် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်အခြေချရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများဖြစ်ကြပြီး UN အနေဖြင့် ၎င်းတို့အား ကူညီရန်နှင့် ဒုက္ခသည်အဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးရန်အတွက် ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“သူတို့တွေ ဆန္ဒပြပေမယ့် ယူအဲန်က ဓါတ်ပုံ (ယူအဲန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်)လာရိုက်ပေးပြီး နိုင်ငံခြား ထွက်ဖို့က မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ ထိုင်း နိုင်ငံရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရဆိုရင် ထိုင်းအစိုးရက သူတို့ကို လက်ခံမှ ယူအဲန်က လာလုပ်လို့ ရမယ်လေ။”ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ မနက် ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ယူအဲန်တာဝန်ရှိသူများက ဆန္ဒပြသူများကို ခေါ်ယူ ပြောဆိုမှုများရှိသော် လည်း တိကျသည့် အဖြေများ ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြမှုကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ ကရင်ဒုက္ခသည်များကော်မတီ(ကေအာရ်စီ) အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ စောထွန်းဝင်းက “ဆန္ဒပြ တာက အဓိက နိုင်ငံခြားထွက်နိုင်ရေး ကိစ္စပါပဲ။”ဟု ပြောဆိုသည်။
နို့ဖိုးစခန်းတွင် ယခင်က ထိုသို့ အလားတူ ဆန္ဒပြသူများမှုမျိုး မရှိဘဲ ယနေ့ဆန္ဒပြမှုတွင် ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်နှင့် သျှမ်း တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိ နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကရင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စုစုပေါင်း ၁သောင်းကျော်နေထိုင်ပြီး တရားဝင် ဒုက္ခသည်အ ဖြစ် UNHCR မှ မှတ်ပုံတင်ပြီးသူ ၈ထောင်ခန့်နှင့် မှတ်ပုံမတင်ရသေးသူ ၃ထောင်ခန့် ရှိသည်ဟု ကေအာရ်စီ၏ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ထုတ် ဒုက္ခသည်ဦးရေအရ သိရသည်။
မြန်မာပြည်ဟာ ၀ိုင်းဆွဲဖဲ့စားခံရမယ့် အသားတုံးမဖြစ်စေဖို့ကိုယ်ကျိုးအတ္တတွေ ခွာချကြပါ။
မြန်မာပြည်ဟာ ၀ိုင်းဆွဲဖဲ့စားခံရမယ့် အသားတုံးမဖြစ်ဖို့တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ရင် ကိုယ်ကျိုးအတ္တတွေ ခွာချပြီး ကာကွယ်ကြဖို့လိုပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ယူနန်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသုတေသနဌာနကို ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်က မြန်မာပြည်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ တရုတ်ပြည် ယူနန်တက္ကသိုလ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနဌာန ဖွင့်လှစ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကို အကြောင်းပြ ဖေါ်ပြခဲ့ပေမယ့် တရုတ်အစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက အုပ်ချူပ်နေသူတွေအကြား လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပေါင်းစပ်ပေးတဲ့ နေရာမှာ အဓိက ရည်ရွယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်အကြောင်းတွေကို ပညာရေးအကြောင်းပြပြီး အနီးကပ်လေ့လာကာ မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနယ်ချဲ့ နိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရ တရုတ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအကျိုးစီးပွားတွေအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဒီ ယူနန်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသုတေသနဌာနရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု အကျိုးရမှုကတော့ - လွန်ခဲ့တဲ့ မနေ့ တစ်နေ့ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့ က Guangxi ပြည်နယ်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို နေပူပူပြင်းလှတဲ့ ရန်ကုန်နေကိုတောင် ဂရုမစိုက်ဘဲ မြန်မာပြည်မှာ ဂုတ်သွေးစုတ်ဖို့ လောက်သာ သိတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီ တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဒေသဆိုင်ရာ အရောင်းမန်နေဂျာရဲ့ပြောစကားကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ သိထားရအောင် ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတယ် - “အနောက်နိုင်ငံတွေက စီးပွားရေးကန့် သတ်ပိတ်ဆို့ မှုတွေ ရပ်သွားရင် တရုတ်ပြည်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာ ဆောင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှာပါ” တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့မြန်မာပြည်ဟာ ခေတ်သစ်မှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရန်သူတွေ ၀ိုင်းနေပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးကြရင် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ကြပါနဲ့ ၊ ကိုယ်ကျိုးအတ္တမထားကြဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ကြဖို့အထူးအရေးကြီးလှပါပြီ။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:44 AM No comments:
"မင်းကွာ...အပျိုလေးတန်မဲ့ ဆိုင်ထိုင်ရသလား" တဲ့ ။
လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ ဆိုင်ထိုင်ဖို့ရာကို သင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာ
ရိုးသားတဲ့အရည်ကို ရိုးသားစွာသောက်နေတာပါရှင် ၊
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် မဖြေရှင်းပဲ ရွေးတဲ့လမ်းကို ဖြောင့်အောင်လျှောက်တတ်တာ
"မင်းကွာ...အပျိုလေးဖြစ်ပြီး ရယ်တာကြီးကိုက " တဲ့ ၊
ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မမဖြေရှင်းပါဘူး ။
"မင်းကွာ...အပျိုဆိုတာ အိမ်ပြန်သိပ်မိုးမချုပ်သင့်ဘူး" တဲ့ ၊
ဒီလိုနဲ့ပဲ ချစ်သူဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတော့ သူလဲနိုင်ငံခြားကို
ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ ပါးနှစ်ဘက်လုံးမှာပါတဲ့ ပါးချိုင့်ပါပဲ။
LCCI(3)ကို ချောချောအိမ်မှာ Guide လုပ်ပေးဖို့ပေါ့ ၊
ကိုယ်ဝန်(၂)လရှိတာသိလို့ စိတ်ညစ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးသောက်တာတဲ့ ၊
လူဦးလို့ပေါ့ ၊ မသေကောင်းမပျောက်ကောင်းရှင် ၊
ကျွန်မစိတ်ထဲ မရှင်းဘူးရှင် ၊ ကျွန်မသိသလောက်တော့ ချောချောဟာ
အဲဒီနေ့ကတည်းက စကားပြောရင် ဖြေးညှင်းစွာ ၊ရယ်ရင်လည်း
တိုးတိုးလေးရယ်တတ်တဲ့ ပါးချိုင့်နှစ်ဘက်နဲ့ချောချောကို နောက်ထပ်
အချိန်တွေကြာလာခဲ့ပြီး တနေ့မှာတော့ ဖိတ်စာတစ်စောင်နဲ့စာအိတ်တစ်လုံးကို
ဖိတ်စာကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာပေါ့ ၊ ဆက်ဆက်လာပါတဲ့ ။
သွေးကြောင်ရင် ဘေးချောင်မှာရပ်နေမှာပေါ့ ၊ ကျွန်မဆက်ဆက်သွားမှာပါ ။
စာအိတ်ကလည်း သူရေးထားတဲ့စာပါပဲ ၊ဆက်ဖတ်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်တာနဲ့
မင်္ဂလာဆောင်ရက်မှာ အသဲမကွဲဘူးဟေ့လို့ ပြချင်တဲ့ကျွန်မ အလှဆုံးကိုပြင်ပစ်လိုက်တယ် ။
အချစ်ဦးနဲ့လွဲရပေမဲ့ အချစ်ဆုံးနဲ့ဆုံနိုင်ခွင့် ရှိပါသေးတယ်ရှင် ၊
အချစ်မပါဘဲ ဘ၀ကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သူတွေမှအများကြီးပါ ။
ဟော..လာနေပြီ..မင်္ဂလာမောင်နှံ ၊ သူရွေးတဲ့သတိုးသမီးကို သေသေချာချာကြည့်မှ..
ပါးချိုင့်..သတိုးသမီးမျက်နှာပေါ်က ထင်ရှားလှတဲ့ ပါးချိုင့် ..
ချောချော..သြော် သတိုးသမီးက ချောချော ကိုး ။
ပစ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စာကို ချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်မိတယ် ၊
" ငါပြန်လာတာ နင့်ကိုအသိမပေးတာက အိမ်ထောင်ပြုတော့မှာမို့ပဲ ၊
အိမ်ကရှာပေးတာ ၊ ငါလဲနှစ်သက်တယ် ၊
သူ့မှာ ငါကြိုက်တဲ့ အပျိုစင်အချက်တွေရှိတယ် " လေတဲ့ ။
ကျွန်မ ဒီစာကို မှန်ဘောင်သွင်းပြီး ရွှေကွပ်ထားလိုက်တယ် ။
ကျွန်မကို တသက်လုံးရယ်နေအောင်လုပ်ပေးမဲ့ ဟာသစစ်စစ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့ ။
ကျွန်မလေ ၀တ္တုမရေးတတ်လို့ပါ ၊ ရေးများရေးတတ်ရင်ဖြင့် ၀တ္တုခေါင်းစဉ်ကို
" ဘယ်သူ အပျိုစစ်ပါသလဲ " လို့ ပေးမိမှာပါ ။ ။
fwd mail ပေးပို့သူ ငဲငယ်အား ကျေးဇူးတင်လျက်....
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:38 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:36 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:31 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:28 AM No comments:
UNFC တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဂျပန်ခရီးစဉ် ရုပ်သံ မှတ်တမ်း
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:20 AM No comments:
သူတို့အဖွဲ့ ပြောနေတဲ့စကားတွေက ဘယ်တော့မှ ဒေါ်လာ ငါးသန်းအောက်မရှိဘူး။ သူတို့ရဲ့ကားတွေကလည်း ဒေါ်လာ လေးငါးသန်းတန် ကားတွေဖြစ်တဲ့ ဖရာရီ (Ferrari) ကားတွေဆိုတော့ အင်ဂျင်ပါဝါ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူတို့ဘေးမှာ ကလည်း စကတ်တိုတိုနဲ့ အရမ်းကိုလှတဲ့ ကောင်မလေးသုံးလေးယောက်ကလည်း မူးယစ်ရီဝေနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့။ အားလုံးလိုလိုက အနောက်တိုင်းစတိုင် မြူးကြွတဲ့တေးသီးချင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အချိန်။ အချိန်က ညသန်းခေါင်ယံ။ နေရာက မင်္ဂလာဒုံလေယျာဉ်ကွင်း။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့က ဘာလို့လေယျာဉ်ကွင်းကိုလာတာလဲလို့ မေးစရာရှိတယ်။
သူတို့ရဲ့ကားတွေက နောက်ဆုံးပေါ် အကောင်းဆုံးကားတွေဖြစ်တော့ အရမ်းမြန်တယ်။ အင်ဂျင်ပါဝါကောင်းတော့ အသံ တွေက ဂျက်လေယျာဉ်အလားပဲ။ ဒီတော့ ဒီကားတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကရှိသမျှလမ်းတွေပေါ်မှာ တခုမှ သူတို့ကားတွေနဲ့ မကိုက်ဘူး။ အဆင်မပြေဘူး။ ကားမောင်းပြိုင်ရင် လမ်းကောင်းတာကို ရှာဖွေရတယ်။ သူတို့ကားတွေအတွက် လမ်း ကောင်းတဲ့နေရာက ရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံလေယျာဉ်ကွင်းတခုပဲရှိတယ်။ လေယျာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်မှာ ကားမောင်းပြိုင်တာက အန္တရာယ်လည်းကင်းတယ်။ ဒ့ါကြောင့် မရွေးချင်ဘဲ ရွေးရတဲ့လေယျာဉ်ကွင်းဖြစ်တယ်လို့ သူတို့တစုက ကျနော့်ကို ရှင်းပြ ပါတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ကို လေယျာဉ်ကွင်းရဖို့ဘယ်သူက ခွင့်ပြုတာလဲဗျ”
“ဒါများအဆန်းလုပ်လို့။ လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် ပြီးတာပဲ”
ညသန်းခေါင်ယံမှာ လေယျာဉ်အတက်အဆင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ သူတို့တစု ကားမောင်းပြိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ဆိုတာ က သူဋ္ဌေးကြီး ဦးတေဇသားများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေရဲ့အချစ်ဆုံးမြေး ဖိုးလပြည့်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တော်စောင့် တွေဖြစ်တဲ့ ဗလကောင်းကောင်း ခပ်မိုက်မိုက်မျက်နှာနဲ့လူတွေကလည်း သူတို့ဘေးမှာ ရပ်နေကြပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ ဂျိုင်း အောက်မှာ သေနတ်ကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ အင်မတန်ကို အသက်ဝင်တယ်။ အားလုံးက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တ ရားအားထုတ်နေတာ မဟုတ်တော့ အပြုံးကိုယ်စီ မရှိကြပါဘူး။ မျက်နှာတိုင်းက ခပ်တည်တည်နဲ့။
ဒေါ်လာသုံးသန်းကြေး ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတခုကို ကမ္ဘာပေါ်က အဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်မှာ ကျင်းပနေတာကို စာဖတ်သူများ အခုမှ သိကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကလည်း မကြာခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီး သူတို့ဘေးနားက သက်တော်စောင့်ကြီးက ရှင်းပြပါတယ်။
“ဒေါ်လာသုံးသန်းကို ဘယ်လိုမျိုးပေးလဲ။ ငွေအိတ်နဲ့ပေးတာလား။ ချက်လက်မှတ်နဲ့ ပေးတာလားဗျ” ကျနော်က အရပ် ခြောက်ပေလောက်ရှိတဲ့ ဗလကောင်းကောင်း သက်တော်စောင့်ကြီးကို ဆက်မေးတော့….
“ငွေပေးတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ လေနဲ့ပေးတာ။ သူတို့အဖေတွေ အဘိုးတွေဆီကိုပြောလိုက်ရင် ဒေါ်လာသုံးသန်းတန် လုပ် ကွက်ရတယ်။ သုံးသန်းတန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးတာ”
ဒီညကောင်းမောင်းပြိုင်ပွဲပြီးရင် ကျနော်တို့ နိုက်ကလပ်ကိုဆက်သွားမယ်။ အဲဒီမှာ အရက်သောက်ကြမယ်လို့ဆိုပြီး သက် တော်စောင့်တွေက ရှင်းပြတယ်။ သက်တော်စောင့်က တယောက်နှစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးရဲ့ အ၀တ်အစား တွေဟာ ဆင်တူတွေချည်းပဲ ၀တ်ထားတော့ အင်မတန်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
လေယျာဉ်ကွင်း ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေနိုင်သွားလဲဆိုတာကိုတော့ မသိချင်ပါနဲ့။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော် မပြော ချင်လို့ပါ။ ပွဲလည်းပြီးရော သူတို့လူစု နိုက်ကလပ်ဆီကို ချီတက်ကြပါတယ်။
သြစတေးလျကနေ ရန်ကုန်ကို အလည်လာတဲ့ ကျနော်လည်း နိုက်ကလပ်တက်ပါတယ်။ ကျနော်သောက်နေတဲ့ စားပွဲ ၀ိုင်းကို VIP ၀ိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ ရှေ့ ဆုံးတန်းရဲ့သုံးဝိုင်းမြောက်ပွဲမှာ ကျနော်တယောက်တည်း ထိုင်သောက်နေမိတယ်။
ကျနော်တယောက်တည်း ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်စားပွဲကလွဲရင် ဘယ်သူမှ VIP ၀ိုင်းမှာ မထိုင်နိုင်ဘဲ ရိုးရိုးစားပွဲတွေမှာသာ သူတို့ထိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာနဲ့ရှင်းရတဲ့နေရာမို့ အင်မတန်ဈေးကြီးပါတယ်။ သြစတေးလျမှာလည်း ဒေါ်လာသုံးတာဆိုတော့ ကျနော့်အတွက် မထူးဆန်းပါဘူး။ စားပွဲပေါ်မှာ Black Label တလုံးနဲ့ ချိစ်ကိုက်ပြီး ရင်သားလှလှ၊ တင်သားလှလှတွေကို ထိုင်ပြီး ရှုစားနေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော့်ရှေ့က မြင်ကွင်းတွေက ရုတ်တ ရက် ပြာယာခတ်သွားကြတာကို သတိထားမိတယ်။
ဗလကြီးကြီး၊ အရပ်အမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့လူသုံးယောက်က ရှေ့ဆုံးတန်းက VIP စားပွဲခုံ လေးငါးလုံးကို တခုံတည်း ဖြစ်အောင်စုစည်းလိုက်တယ်။ စားပွဲပေါ်မှာ Gold Label သုံးလုံးကို ဒေါင်လိုက်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ တလုံးကို ဒေါ်လာ နှစ်ရာလောက်ပဲတန်တယ်။ ကျနော့် ဘလက်လေဘယ်က ငါးဆယ်ကျော်ပဲတန်တော့ သူတို့ထက် ဈေးနည်းတယ်။ သက် တော်စောင့် သုံးယောက်ထဲကနှစ်ယောက်က နိုက်ကလပ်ထဲမှာ အရက်ဝိုင်းကို စောင့်နေပြီး သူတို့ဆရာအတွက် အသင့် ပြင်ထားပေးရတယ်။ ကျန်တဲ့တယောက်က အပြင်ကိုထွက်ပြီး ဒေါ်လာလေးငါးသန်းတန်တဲ့ ဖရာရီကားနားကိုသွားပြီး အ ဆင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့တယ်။ တံခါးဖွင့်ပေးတော့ လူငယ်တယောက် ရုပ်ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ကားပေါ်က ဆင်း လားတယ်။ သူ့ဘေးမှာ သက်တော်စောင့် သုံးလေးယောက်။ ဘေးနားမှာက ခပ်ချောချောကောင်မလေးတစု။ Sexy ခပ် ကျကျ အ၀တ်အစားတွေနဲ့။ သူတို့လူတစု နိုက်ကလပ်ထဲကို ၀င်လာတယ်ပြီး အဆင်သင့်ပြင်ထားတဲ့ Gold label ၀ိုင်းမှာ ထိုင်ပြီး ပျော်ပါးကခုန်ကြတာကို သူတို့အနောက်ကနေ ကြည့်နေမိတယ်။ အားကျလိုက်တာ။ ကံကောင်းလိုက်တဲ့ လူငယ် တွေ။
သက်တော်စောင့်တယောက်နဲ့ ကျနော် ငယ်ငယ်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူက ခရာတေးကစားတာ အလေးမ တာကို ၀ါသနာပါတဲ့လူ။ အရပ်ကလည်းကောင်း ဗလကလည်းကောင်းတော့ သူ ဒီအလုပ်ကို ရတာထင်တယ်။ သူဒီအ လုပ်လုပ်နေမှန်း ကျနော် မသိဘူး။ ကျနော် တွေ့တွေ့ချင်း သူ့နိုက်ကလပ်ထဲမှာ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
“ဟေ့…ဘဲကြီး ဘယ်တုန်းက ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်နေတာလဲဗျ”
“ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ရောက်တာ။ မင်းက ဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ”
“ဦးတေဇသားတွေကို သက်တော်စောင့်လုပ်နေတာ။ နောက်မှ စကားပြောမယ်ဗျာ။ အခု အလုပ်မအားသေးလို့”
သူ အလုပ်များနေတော့ ကျနော်နဲ့ ကောင်းကောင်းစကားမပြောဖြစ်ပါဘူး။ ကျနော်လည်း သောက်စား ကခုန်ပြီး တွေ့တဲ့ ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ ကျနော် တည်းခိုတဲ့ ဟိုတည်းကို ပြန်လာပြီး အပန်းဖြေခဲ့ပါတော့တယ်။
မှတ်ချက် … ကျနော့်အတွေ့ အကြုံမဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းရဲ့အတွေ့အကြုံ အဖြစ်မှန်ကို ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:23 PM No comments:
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦး ညောင်တုန်း NLD ရုံးဖွင့်ပွဲ သွားရောက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦးဟာ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း ညောင်တုန်းမြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ NLD ရုံးခွဲဖွှင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနားကို သွားရောက် ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို သွားရောက်ရာမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေက ဦးတင်ဦးကို သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ခဲ့ကြပါတယ်။ ရုံးဖွှင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦးနဲ့
သဘာပတိအဖွဲ့ဝင် ဦးလှဖေတို့က တက်ရောက်လာကြတဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို အသီးသီး အမှာစကား ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အခမ်းအနားအပြီးမှာ ကရင်ဒုံးအကနဲ့ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့သူ
ကရင် တိုင်းရင်းသူလေးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကို ချက်ချင်းရပ်ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဝိုင်းဝန်း ဖော်ဆောင်ပေးကြဖို့ တောင်းဆို သွားခဲ့ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:16 PM No comments:
နေ့စား အလုပ်သမငယ် နှစ်ဦးကို ဗလက်ကာရပြုကျင့်သူ သစ်တော ညွှန်ကြားရေးမှူး အရေးယူမခံရသေး
နေ့စား ပုတ်ပြတ် ရခိုင်အလုပ်သမငယ် နှစ်ဦးကို ဖျားယောင်း သွေးဆောင်ပြီး ဗလက်ကာရ ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ မောင်တော ခရိုင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးကို အခင်း ဖြစ်ပွားသည်မှာ တစ်လ နီးပါးခန့် ရှိလာပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယခု အချိန်ထိ အရေးယူခြင်း မရှိသေးကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မောင်တော သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ မေယု ကြိုးဝိုင်းသစ်တော ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
မောင်တော ခရိုင် သစ်တော ဦးစီးဌာ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင်မောင်နိုင်အား နေ့စား အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦးအား ဗလက်ကာရ ပြုကျင့်ကြောင်း တိုင်ကြားခံရပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ် သစ်တောညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးကျော်စိုးခိုင်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် သစ်တော ဦးစီးမှူးတို့ လာရောက်ပြီး မတ်လ ၂၇ မှ ၃၀ရက်နေ့ အထိ ၄ ရက်တိုင်တိုင် မောင်တောခရိုင် သစ်တောဦးစီးဌာန ရုံးခန်းမ၌ စစ်ဆေးခဲ့သည်ဟု သစ်တော ဌာနမှ အမည် မဖေါ်လိုသူ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက ပြောသည်။
" သစ်တောဌာန တာဝန်ရှိသူတွေက လာရောက်စစ်ဆေးတာတော့ ပီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဦးမောင်မောင်နိုင်က အခုအချိန်ထိတော့ အရေးယူမခံရသေးဘူး။ ဒီအမူဟာ မှန်ကန်ကြောင်း ဦးမောင်မောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်" ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ၀န်ထမ်းက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် သစ်တော ဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများသည် အဆိုပါ အမှုအခင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မောင်တောခရိုင် သစ်တောဌာနမှ တောအုပ်ကြီး၊ တောအုပ်၊ တောခေါင်း၊ တောကြပ်နှင့် ရုံးတွင်းအမှုတွဲထိမ်း၊ ငွေစာရင်းထိမ်း၊ စာရေးဝန်ထမ်း (၈)ဦးတို့ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည်ဟုလည်း သစ်တော ၀န်ထမ်းက ပြောသည်။
" သူတို့က ၀န်ထမ်းတွေကို သာမကဘူး ရုံးရှေ့ ကွမ်းယာဆိုင်ရှင် ၂ ဦး အပါအ၀င် ရုံးအနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကုန်သွယ် လယ်ယာ ဦးစီးဌာနက ၀န်ထမ်း ၂ဦး၊ သမ၀ါယမမှ ၀န်ထမ်း ၂ ဦး၊ ရေနံ ရောင်းဝယ်ရေးရုံး ၀န်ထမ်း ၂ ဦး၊ စသုံးလုံးမှ ၀န်ထမ်း ၂ နဲ့ ဆင်ဖြူတော် ရေခဲစက် အလုပ်သမား ၂ ဦးကိုလည်း ခေါ်ယူ မေးမြန်းမူတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်သာယာ ကျေးရွာ ရ.၀.တ (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်းနဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ် ဦးကိုလည်း မျက်မြင်သက်သေ အဖြစ် စစ်ဆေးခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ စစ်ဆေးမူများ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ဦးမောင်မောင်နိုင်ဇနီးနှင့် အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးကျော်ဇေယျတို့က နစ်နာသူ အမျိုးသမီးငယ် (၂) တို့ထံ သွားရောက်ပြီး နစ်နာကြေး အတွက် လျော်ကြေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှုကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့် တိုင်စာကို ရုတ်သိမ်းပေးရန် လာရောက် စည်းရုံး ခဲ့ကြသည်ဟု အမျိုးသမီးငယ်၏ ဆွေမျိုး တစ်ဦးက ပြောသည်။
" သူတို့က လျော်ကြေးငွေ ပေးမယ်။ တိုင်ကြားစာကို ရုတ်သိမ်းပါ။ မဟုတ်ရင် တရားရုံးရောက်သွားရင် အကုန်လုံး အရှက်ကွဲမယ်။ ပီးရင် အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦးကို တရားခံ အဖြစ် ထည့်သွင်းပြီး တရား ပြန်တင်မယ် စသဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ဒီပြဿနာကို ရုတ်သိမ်းဖို့ လာမပြောနဲ့။ ဆက်လက် ပြောရင် ပြောတဲ့သူတွေကိုပါ မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အသင်းတွေကိုလည်း တိုင်ကြားမှာ ဖြစ်သလို တရားရုံးမှာလည်း ဆက်လက် တိုင်ကြားသွားမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်" ဟု သူမက ပြောသည်။
အဆိုပါ သားမယား ပြုကျင့်ခံရသူ အမျိုးသမီးငယ် ၂ဦးကို အလုပ်ခန့်ပေးပြီး အ၀တ်အထည် အသစ်အဆန်းများဝယ် ပေး၍ စည်းရုံး သွေးဆောင် လှည့်ဖြားကာ သီးခြားစီ သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦးကို ရုံးတွင် နေ့စား အလုပ်သမများ လိုသည်ဟု ဆို၍ သစ်တောဌာန ၀န်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသည့် တောခေါင်း ဦးစိုးမြင့်နှင့် တောခေါင်း ဦးဘစောတို့က စည်းရုံး ခေါ်ယူလာသော အမျိုးသမီးငယ်များ ဖြစ်ကြောင်း သစ်တော ဌာန သတင်းရပ်ကွက် အရသိရသည်။
ဧပြီလ ၇ ရက် နံနက်(၉)နာရီက လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင်မောင်နိုင်သည် ၀ါး၊ သစ်၊ ထင်း၊ မီးသွေး နှင့် လမ်းခင်း ကျောက် ရောင်းဝယ်နေသူ (၁၄)ဦးကို ခေါ်ယူပြီး အစည်းအဝေး တရပ်ပြုလုပ်ကာ အမှု အခင်းစစ် ဆေးရာတွင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံသည့် ကုန်ကျစရိတ် ကျပ်ငွေ ၇သိန်းကို ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပေးရန် တောင်းခံခဲ့သည် ဟု သိရသည်။
သင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း နေပြည်တော်ရှိ သစ်တော ဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအေးမြင့်မောင်ထံ အမူမှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပေးရန် အသနားခံ သွားရမည်ဖြစ်၍ ခန့်မှန်းခြေ ကုန်ကျမည့်စရိတ် ကျပ်ငွေ သိန်း(၂၀)ကိုလည်း အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာသူ (၁၄)ထံမှ အကူအညီ တောင်းခံခဲ့သည်ဟု အမည် မဖေါ်လိုသူ သစ်ကုန်သည် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော အမူကိစ္စ အပေါ် မောင်တောမြို့တွင် စိတ်ဝင်စားသူ များနေပြီး ဦးမောင်မောင်နိုင်မှာ ယခုအခါ လူမြင်ကွင်းမှ ပျောက်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
မောင်တောခရိုင် သစ်တောဌာနအား ဦးမောင်မောင်နိုင် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေကြားခြင်း မပြုဘဲ ဖုံးချသွားခဲ့သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:10 PM No comments:
ဒီလိုကားပိုင်ရှင်တွေဟာ တရားဥပဒေ အထက်ကလူတွေဖြစ်ရမယ်
Ah Ba Yah က.ည.န နံပါတ်ပြားလည်းမဟုတ် ။ ဖတ်ရလွယ်ပြီးမြင်သာသော အရွယ်ရှိသော စာလုံး နံပါတ်ပြားလည်းမဟုတ် ။ စာလုံးအရောင်ကလည်း အဖြူမဟုတ် ။ ဒီကားမျိုးတွေကို အရေးမယူပဲ ( ရန်ကုန်မြို့ ) လမ်းတွေပေါ်မှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် သွားလာ မောင်းနှင်ခွင့်ပေးထားတာဟာ .............. ဒီလိုကားပိုင်ရှင်တွေဟာ တရားဥပဒေ အထက်ကလူတွေဖြစ်ရမယ် ။ မှတ်ချက် ။ ။ ယခုအချိန်အထိ မြန်မာပြည်တွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသေးတာကို ပြဆိုပါတယ် ။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:04 PM No comments:
မူးယစ်ရာဇာ ၂၀ ကျော် ထိုင်းတွင် ဆုငွေထုတ်၊ မြန်မာ ၃ ဦးကို ကြေးအများဆုံး ပေးမည် – Thailand announces $ 400,000 bounty for 25 drug smugglers
ဧပြီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂
စိုင်းနော်ခမ်း၊ ဦးယိဆေး၊ ဦးနှုတ်ခမ်းမွေး တို့၏ ပုံ နှင့် အချက်အလက်များ ပါဝင်သော ဤပိုစတာအား မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်း ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
မူးယစ်ဆေးကုန်ကူးမှုတွင် ထိပ်တန်းမှ ပါဝင်သည်ဟုဆိုသူ လူ ၂၀ ကျော်၏ အမည်ကို ထိုင်းအစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်ရာ ထိုအထဲတွင် မြန်မာပြည်ဘက်မှ ၃ ဦး ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပြီး ထို ၃ ဦးမှာ ဆုငွေ အများဆုံး အထုတ်ခံထားရသူများ ဖြစ်နေလေသည်။
ထိုင်းအစိုးရက ထိုစာရင်းကို ပြီးခဲ့သည့် သောကြာတွင် ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်၏။
ထိုသုံးဦးမှာ စိုင်းနော်ခမ်း၊ ဦးယိဆေး၊ ဦးနှုတ်ခမ်းမွေး တို့ ဖြစ်သည်။
ထို ၃ ဦးအကြောင်းကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ သတင်းများကို ဦးစားပေးဖော်ပြလေ့ရှိသော သျှမ်းသံတော်ဆင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရှိရ၏။
စိုင်းနော်ခမ်း – အသက် ၄၂ နှစ်၊ ရွှေတြိဂံဒေသ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခု၏ ခေါင်းဆောင်၊
ဆုငွေ နှစ်သန်း (ဒေါ်လာ ခြောက်သောင်းခွဲ)
ဦးယိဆေး – အသက် ၆၆ ၀န်းကျင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တခု၏ ခေါင်းဆောင်၊
ဆုငွေ တစ်သန်း (ဒေါ်လာ သုံးသောင်းကျော်)
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး - DKBA တပ်ဖွဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်၊ ယခင်က နယ်စပ်တွင်မိသော ဆေးဝါးများ သူ့ထံမှလာဟု ထိုင်းအစိုးရပြော၊
ဤ ၃ ဦးအပါအ၀င် အလိုအရှိဆုံး လူ ၂၅ ဦးအတွက် ထိုင်းအစိုးရက ဆုချမည့် ငွေပမာဏမှာ ဘတ် ၁၂ သန်း (ဒေါ်လာ ၄ သိန်း) ဖြစ်၏။
ဤ ၂၅ ဦးသည် ထိုင်းအစိုးရ မူးယစ်တိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့စာရင်းတွင် ရှိသော မူးယစ်ကုန်ကူးသူ ခြောက်သောင်းကျော်ထဲမှ ထိပ်တန်းတွင် ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး သတင်းပေးရုံမျှဖြင့် ထိုဆုငွေ ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။
ဆုငွေအား သတင်းပေးသူက ၆၀% ရမည် ဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးသည့် အရာရှိ/၀န်ထမ်းက ၄၀% ရမည်ဟု MCOT သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ရေးသားထားသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:58 PM No comments:
အိမ်ဖော်ကို သတ်ရန်ကြိုးစားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံရသော မလေးရှားအိမ်ရှင်
(Maid Nirmala Bonat’s Case)
မလေးရှားနိုင်ငံသူ Yim Pek Ha (အသက် -၄၀- နှစ်၊ ကလေးငယ် ၄- ဦးမိခင်)၊ သူ၏ အိမ်ဖော် Ms. Nirmala Bonat ကို ရေနွေးပူဖြင့် ပက်ခြင်း၊ မီးပူဖြင့် ကပ်ခြင်း နှင့် ရိုက်နှက်ခြင်းတို့ကြောင့် ၂၀၀၄- ခုနှစ်တွင် တရားစွဲခံခဲ့ရသည်။
Ms. Bonat ရေနွေးနှင့် အလောင်းခံရသည့် ဒဏ်ရာများ
ထိုစဉ်က အသက် ၁၉-နှစ်အရွယ်ဖြစ်သော၊ Ms. Bonat က အိမ်ရှင်သည် သူမအားပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီး ဆဲဆိုသည့်အပြင်၊ ရေနွေးနှင့်ပက်ခဲ့သည် ဟုထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူမကို မီးပူဖြင့် ကပ်ခဲ့သည်။ (မီးပူဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ကပ်ခံခဲ့ရသည်။) စတီးရေခွက်ဖြင့် သူမမျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရ၍ နှာခေါင်းပျက်စီးခဲ့ရပြီး၊ မျက်နှာတွင်ပြင်းစွာ ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ၀တ်ထားသော အ၀တ်များ လောင်ကျွမ်းပြီး၊ အရေပြားများ Third Degree Burn (အရေပြားရှိ အလွှာနှစ်ခုစလုံးလောင်ကျွမ်းခြင်း) ထိလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အနှံ လူမဆန်စွာ ရက်စက်ခံရသော Ms. Bonat
သတင်းစာများမှ သူမဒဏ်ရာရပုံများကို ပုံဖြင့်ပြသခဲ့သည်။
Yim Pek Hla ဘက်မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော ရှေ့နေများအဖွဲ့က Nirmala Bonat ၏ဒဏ်ရာများမှာ သူမကိုယ်တိုင် အိမ်တွင်းမတော်တဆ ဖြစ်မှုကြောင့် လောင်ကျွမ်းဒဏ်ရာရခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း အခြေအမြစ်မကျစွာ တင်ပြခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
ဤအမှုသည် အင်ဒိုနီးရှား အိမ်ဖော်များ မလေးရှားတွင် ရက်စက်ခံရခြင်းများတွင် အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သည်။
Ms. Yim ကိုဖမ်းဆီးပြီး နောက်နေ့တွင် အိမ်ရှင်ရှေ့နေများက၊ Ms. Bonat သည် အိမ်ရှင်ထံမှ မလေးရှားရင်းဂစ် ၁၀ ၀၀၀ (တစ်သောင်း) ခိုးယူသည် ဟုအမှုဖွင့်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နောက်အမှုတစ်ခု အဖြစ် ထိုသို့ခိုးယူသည်ကို အိမ်ရှင်သိရှိသောကြောင့် အပြစ်မကျစေရန်၊ သူမကိုယ် သူမ ဒဏ်ရာရအောင် ပြု၍ အိမ်ရှင်ကို လိမ်လည်စွပ်စွဲသည် ဟုတရားစွဲခဲ့သည်။
ထို့နောက် မကြာမီတွင် ရှေ့နေများ၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် Ms. Yim သည် အာမခံ ဖြင့်လွတ်ခဲ့သည်။ (အာမခံအဖြစ်တင်ရသောငွေ- မလေးရှား ရင်းဂစ်- ၈၅ ၀၀၀ ($US 24,300))။ ထို့နောက် Ms. Bonat ကို အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှိ ဂေဟာသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ သူမသည် ဤအမှုမပြီးမချင်း နိုင်ငံ အတွင်းမှ မထွက်ခွာရ ဟူ၍ အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ (၂၀၀၈ - ဇန်န၀ါရီလ ထိ)။
Ms. Bonat အပေါ်ဆွဲထားသော အမှုများမှာ လုံးဝမဟုတ်၊ သက်သေမရှိသည့်အပြင်၊ တမင်လုပ်ကြံတရားစွဲကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် အမှုနှစ်ခုလုံးမှ တရားသေလွတ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် Ms. Yim ၏ ရှေ့နေများနှင့် လင်ယောက်ျားက Ms. Bonat ၏ ဒဏ်ရာများမှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြံ၍ ဖြစ်သော ဒဏ်ရာများဖြစ်ကြောင်းကို သြစတြေးလျနိုင်ငံ မှုခင်းဆရာဝန် Dr John Andrew Munro ထံမှ ဆေးထောက်ခံစာကို ရအောင်ယူ၍ တရားရုံးကို တင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် တရားသူကြီး Akhtar ကထိုဆေးစစ်လွှာ ကိုပယ်ချ ၍ နိုင်ငံသုတေသနဆေးရုံ တွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
Yim and her husband Hii Ik Tiing
မလေးရှား၏ လိပ်ကဲ့သို့ နှေးကွေးသောတရားဥပဒေ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်၊ အချိန်များစွာကြာခဲ့ရသည်။ တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးမှုများသည် ၂၀၀၈- နိုဝင်ဘာ ၂၇ -ရက်တွင်မှ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ( တရားရုံး ရုံးချိန်းရက်ပေါင်း ၁၁၀ )
AFP က Ms. Bonat အမှုသည် အဆိုးဆုံး အမှုဖြစ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ (Nirmala's abuse four years ago is the worst-ever reported case in the country [AFP])
သူမသည် အိမ်ရှင်၏နှိပ်စက်နေမှုများကို လပေါင်းများစွာ ခံနေခဲ့ရသော်လည်း မည်သူ့ကိုမှ ဖွင့်မပြောရဲခဲ့ပါ။ ထို့နောက် အိမ်ရာကိုစောင့်ကြပ်သော လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက တွေ့သောကြောင့် ရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ထိုလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းသည် တရားရုံးတွင်မျက်မြင်သက်သေ အဖြစ်ထွက်ဆို ခဲ့သည်။ (Aljazeera News)
ထိုအမှုကို ဆေးစစ်မှုအဖြေများ၊ စစ်ဆေးမှုများ၊ သက်သေများ စသည်တို့ကို အဖက်ဖက်မှ ပြည့်စုံအောင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များနှင့် အင်ဒိုနီးရှား တို့မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၄- နှစ်အကြာ ၂၀၀၈- နိုဝင်ဘာတွင် တရားခံ Ms. Yim Pek Ha အပြစ်ရှိကြောင်း တရားရုံးမှဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Yim သည် Ms. Bonat အား ဆိုးဝါးစွာရက်စက်သော ကာယကံမြောက်ကျူးလွန်မှု အမှု လေးမျိုးကို သူနေထိုင်ရာ Villa Putera, Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur တွင် ၂၀၀၄၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ မတ်လ နှင့် ဧပြီလကာလများက ကျူးလွန်ခဲ့၍တရားစွဲခံခဲ့ရသည်။ Ms. Bonat သည်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ (ရင်သား၊ ပေါင်၊ ကျော) တို့တွင် ဒဏ်ရာများစွာရခဲ့သည်။ (ပုံ)။ မေလ ၁၇ -ရက်နေ့တွင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းမှ တွေ့ရှိခဲ့၍ လူအများသိရှိပြီး၊ အမှုဖွင့်တရားစွဲနိုင်ခဲ့သည်။
အမှုများ (၁) ရေနွေးပူဖြင့် ပက်ခြင်း။ (၂၀၀၄- မတ်လတွင် တစ်ကြိမ်)
(၂) မီးပူဖြင့် ကပ်ခြင်း။ (၂၀၀၄- ဇန်န၀ါရီလအတွင်း တစ်ရက်တည်းတွင် နှစ်ကြိမ် နှင့် ဧပြီလတွင် နှစ်ကြိမ်)
(၃) ပြင်းစွာရိုက်နှက်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ဒဏ်ရာရစေခြင်း။ (အကြိမ်များစွာ)
(၄) ရေခွက်ဖြင့် ရိုက်၍ နှာခေါင်းကို ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် မျက်နှာကို ပျက်စီးစေခြင်း။ (၂၀၀၄- မေလ ၁၇- ရက်နေ့ ညနေ ၃- နာရီ)
နံပါတ် (၄) အမှုကို တရားသေပလပ်ခဲ့သည်။
အမှုသုံးခုအတွက် Ms. Yim Pek Ha ကိုတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁၈- နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၈- နိုဝင်ဘာ -၂၇- ကြသပတေးနေ့)
အမှု (၁) (၂) (၃) တို့သည် ရာဇ၀တ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂၆ အရ အများဆုံး ထောင်ဒဏ်အနှစ်-၂၀၊ (သို့မဟုတ်) ကြိမ်ဒဏ်၊ (သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် တို့ကိုလည်းကောင်း၊ အားလုံးတစ်ပေါင်းတည်း သော်လည်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အမှု (၄) မှာ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် ၇- နှစ်ကျခံရနိုင်သည် (ပလပ်ပီး)။
စိတ္တဇ ရာဇ၀တ်ကောင်ကဲ့သို့သော Ms. Yim Pek Ha ၏ အပြုအမူ….။
တရားရုံးထွက်ဆိုချက်တစ်ခုတွင် Ms. Bonat ပြောသည်မှာ အလုပ်ရှင် Ms. Yim သည် သူမမီးပူတိုက်သည်ကို မသေသပ်ဟု ဆိုကာ ပူနေသော မီးပူ ဖြင့် သူမ၏ ရင်သားများအား အကြိမ်ကြိမ် ဖိကပ်ပြီး၊ ဆဲဆိုရိုက်နှက်ခဲ့သည် ဟုထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုတစ်ကြိမ်ထိလည်း မည်သူမှ မသိခဲ့။ နောက်တစ်ကြိမ် ခွက်ဖြင့် မျက်နှာကို ရိုက်၊ ရေနွေးဖြင့် လောင်းသော အခါမှ၊ သူမကို အိမ်ယာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း က တွေ့ရှိခဲ့၍၊ သူမ၏ ငရဲကာလ များပြီးဆုံးခဲ့သည်။
သို့သော် သေရာပါ ဒဏ်ရာ၊ အမာရွတ်၊ နှင့် အခြားရုပ်ပျက်သည်ထိ လူတစ်ဦး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရမှုများကြောင့် သူမသည် တစ်ဘ၀လုံး ဝေဒနာကို ခံစားသွားရပေတော့မည်။
Ms. Bonat ၏ သေရာပါ ဒဏ်ရာများ
တရားသူကြီး Akhtar Tahir က Ms. Yim သည် အန္တရာယ်ရှိသော စိတ္တဇရာဇ၀တ်ကောင်ကဲ့သို့သော အပြုအမူများကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုင်း ၀ိုင်းတွင် မည်သို့မျှခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ မတွေ့သည့်အတွက် တရားခံရှေ့နေများ၏ အယူခံ၊ အသနားခံမှုများကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ချက်ချင်းကျခံစေရမည် ဟုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၈- Kuala Lumpur တရားရုံး)
Judge Datuk Aktar Tahir
တရားရုံးမှ တရားခံအား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းအပေါ် လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့များမှ ကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များမှ ဤသို့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံနေစဉ်၊ အမိန့်ချပြီး နောက်တစ်ရက်တွင်၊ Ms. Yim ၏ အမျိုးသား Hii Ik Ting ကရှေ့နေများနှင့် တိုင်ပင်၍ မလေးရှားအထက်တရားရုံးတွင် အာမခံ (မလေးရှားရင်းဂစ် - ၂၀၀ ၀၀၀) တင်ပြအသနားခံခဲ့သည်။ (**)
Ms. Bonat သည် သူမနိုင်ငံ အင်ဒိုနီးရှားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါပြီ။
မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားဆက်ဆံရေးမှာ အိမ်ဖော်များအပေါ် ရက်စက်မှုများကြောင့် အလွန်တင်းမာခဲ့သည်။ Ms. Bonat အမှုပေါ်ထွက်လာသော အခါ အင်ဒိုနီးရှားတွင် အကြီးအကျယ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဤအမှုသည် အင်ဒိုနီးရှားမှ မလေးရှားသို့ အိမ်ဖော်လုံးဝမပို့တော့ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာစေသော နံပါတ်တစ် အမှုဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှား သံတမန်က မလေးရှားရှိ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးသို့ နှစ်စဉ် အိမ်ဖော် ၁၅၀၀ ကျော်သည် အိမ်ရှင်တို့၏ မတရားမှုများကြောင့် လာရောက်ခိုလှုံ ကြကြောင်း၊ အများစုမှာ လစာမရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ အချို့မှာအိမ်ရှင်တို့၏ ရိုက်နှက် မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
Nirmala Bonat အမှုကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့ မလေးရှားသံရုံးရှေ့တွင် လူပင်လယ်ကြီးမျှ ပြည့်နှက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
Ms. Bonat အမှုကြောင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခု
အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရ Susilo Bambang Yudhoyono ကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်းရန် မလေးရှားသို့ပြောခဲ့ပြီး၊ မိမိနိုင်ငံသားကို စော်ကားနှိပ်စက်မှုကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနှင့် တရားလိုပြုကာ Ms. Yim ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
သို့အတွက်ကြောင့် မလေးရှားသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သော၊ တရားမျှတမှုမရှိသော၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထား မှုမရှိသော နိုင်ငံအဖြစ်၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင် သတ်မှတ်ခံရသည်။
လူသားတစ်ယောက် နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ မိန်းခလေး တစ်ဦးပါ.. မလေးရှားမှာ အိမ်ဖော်လာလုပ် လို့ဒီလိုဖြစ်တာပါ....
ထိုကဲ့သို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိသော မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူများအား မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အိမ်ကျွန်အဖြစ် မလာစေလိုပါ။ ထို့ပြင် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ၊ ဒုက္ခသည်များ နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များကို အမြဲဒုက္ခပေးနှိပ်စက်နေသော မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် Najib နှင့် မြန်မာပြည်သားများကို ကမ္ဘာ့အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်၊ ကျွန်ဖြစ်အောင် အိုင်တီခေတ်သစ် ဟစ်တလာ ဇာတ်ခင်းနေသော သိန်းစိန်နှင့် အပေါင်းပါတစ်စုတို့အား ကျွန်ုပ်တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံးအင်အားဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှနေ၍ သမိုင်းတွင် မြန်မာမိန်းခလေးများ၏ အိမ်ကျွန်ဇာတ်ကွက် မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ကြပါစို့.. ဟု လေးစားစွာ တိုက်တွန်းရင်း……
ဤအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများနှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ မိတ်ဆွေကြီး လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ Charles Hector ၏ ဤအမှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ ဥပဒေအကြောင်းအရာများနှင့် Ms. Bonat ဘက်မှနေ၍ လျှော်ကြေးရရန် လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေများ၏ ကြိုးပမ်းမှုများ၊ မလေးရှားဥပဒေ၏ လူသားချင်းစာနာမှုမရှိပဲ နိုင်ငံသားကိုကာကွယ်ပုံများကို ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။
ယခုရေးသားလျက်ရှိသော မလေးရှားရှိအိမ်ဖော်၊ အိမ်အကူတို့၏ဘ၀ စာများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ မလေးရှားအလုပ်ရှင်၊ အိမ်ရှင်တို့၏ မတရားရက်စက်မှုများကို သိစေလိုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညီမ၊ အစ်မများ မလေးရှားသို့အိမ်ဖော်အဖြစ် မရောက်လာရေး အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရေး ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ဤစာကို မိတ်ဆွေတို့ကြိုးပမ်းနေမှုများတွင် သဲတစ်ပွင့်အဖြစ်လိုအပ်ပါက ကြိုက်သလို သုံးနိုင်သည်။
EU Foreign Affairs Council Burma-Myanmar 23. April 2012-Arrival and doorstep UK (Hague)-mp4 April 24, 2012
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:13 AM No comments:
Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, on Myanmar .mp4 April 24, 2012
Ban Ki-moon will later this week head to Myanmar, which he said is ata“critical” moment in its transition, preceded by an official visit to India.
“Myanmar is only at the beginning of its transition. Many challenges lie ahead. Many concerns have yet to be addressed. Yet I am convinced that we have an unprecedented opportunity to help the country advance towardabetter future,Speaking afterameeting of his Group of Friends on Myanmar, the Secretary-General noted that there have been “encouraging” political and economic reforms over the past year-and-a-half in the South-east Asian nation, including recent landmark elections and important steps toward reconciliation.
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:08 AM No comments:
UNFC don't agree with peace process of Government (ရုပ်သံ)
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:03 AM No comments:
မူးယစ်ရာဇာများဖမ်းဆီးရေး ထိုင်းအစိုးရဆုတော်ငွေထုတ်ပြန်၊ မြန်မာမူးယစ်ရာဇာသုံးဦးပါ နယ်ခြားစောင့်တပ် လုပ်ကြတဲ့ မောင်ချစ်သူ၊ ဗိုလ်မုတ်သုန်၊ ဗိုလ်လိုက်သိမ့် တို့ နာမည်မပါတော့ ခုလောက်ဆိုသူတို့ပြုံးနေလောက်တယ်။
Wanted by Thai police
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:59 AM No comments:
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေးကို မူးယစ်ဆေးမှုဖြင့် ထိုင်းက ဆုငွေထုတ်
အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (DKBA) တပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး (ခေါ်) ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးရန် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Office of the Narcotics Control Board (ONCB ) အဖွဲ့က ဆုငွေ ထိုင်းဘတ် ၁၀ သိန်း ထုတ်လိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသားများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှ နော်ခမ်း၊ ယင်ဆေး၊ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး အပါအ၀င် ၂၅ ဦး တို့ ဖြစ်ကြောင်း ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ ONCB ၏ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:58 AM No comments:
ုKNL-JAPAN၏ 2007 ခုနှစ် လုပ်ရှားမှု့တချို့မှတ်တမ်းများ
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:38 AM No comments:
KNL-JAPAN၏ 2006 ခုနှစ် လုပ်ရှားမှု့တချို့မှတ်တမ်းများ
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုသော စကားရပ် ပြင်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိဟု သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ ဘက်က တင်ပြထားသော မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရာတွင် ပါဝင်သော စကားရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း သတင်းထောက်များသို့ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ... သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်လာရန်ကို ကြိုဆိုပါကြောင်း သို့ရာတွင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိခဲ့သော လွတ်တော်အမတ် နေရာရယူ၍ လွှတ်တော်တက်ရေး မတက်ရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေါ်တွင်သာ မူတည် ပါကြောင်း သတင်းထောက်များသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု AFP သတင်းဌာနက ရေးသားသည်။
NLD ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်များ ပြင်ဆင်စေလို့သည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရသည့် စာသားများမှာ လွှတ်တော်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများတွင် သာမက ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိုပါက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၌သာ ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက အဆိုပြု၍ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက် ထောက်ခံမှသာ ပြင်ဆင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အချို့သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုလျှင် လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲပါ ပြုလုပ်ပေးရမည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ပြောကြားသည်။
ထို့သို့ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်းကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးနှင့် အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးတို့က လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘဲ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:25 AM No comments:
သမ္မတ ကြီးဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းအပေါ် လူ့ဘောင်သစ် လူငယ် ဥက္ကဌ နော်မေဘယ်လ်ထူး၏ ပါဝင် ဆွေးနွေးချက် (အပိုင်း ၁ - ၂)
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:22 AM No comments:
ကမ္ဘာ့လူငယ်အဖွဲ့ ချူပ် ဒုဥက္ကဌ နော်မေဘယ်လ်ထူးကိုရွေး
Naw Maybel Htoo elected as World youth Org vice president
Naw Maybel Htoo-Vice-President of International Union of Socialist Youth (IUSY)-english
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:18 AM No comments:
Statement 12th anniversayry Migrant Karen Labour Union Meeting-English-burmese
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:16 AM No comments:
ဘာလိုလိုနှင့်SAW MU NAR LAY KNL (JAPAN) ဆုံးတာ (6 ) တောင်ပြည့်တော့မယ်
April 24, 2012 2006/7/17 2006 ခုနှစ်အမှတ်တရများ
ဘလန့်ခ်ျ ဒူးမတ်စ် ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းကတော့ စိတ်ကူးယဉ် ပုံပြင်ဝတ္ထုတွေထက် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ဘလန့်ခ်ျ ဒူးမတ်စ် ကို ပြင်သစ်လူမျိုး ဖခင်နဲ့ လူမည်းသွေးအနည်းငယ်ပါတဲ့ မိခင်တို.က မာတင်းနစ်ကျွန်းစုမှာ ၁၈၆၀ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားတယ်လို. ယုံကြည်ရပါတယ် ။သူမအသက် ၂၅ နှစ်တွင် ဆေးပညာမှ မူမမှန်မှုများနဲ့ထူးခြားမှုများ ဆိုတဲ့ စာတမ်းမှာဖေါ်ပြခံရပါတယ် ။ အဲဒီစာတမ်းမှာ သူမကို"modified duplication of the lower body " လို. ရည်ညွန်းခဲ့ပါတယ် ။
သူမမှာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ တင်ပါးဆုံအရိုးကွင်း ရှိပြီး ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ တတိယခြေထောက်တစ်ချောင်းက သူမရဲ့ ပေါင်ခွကြားမှာ ကပ်နေတယ် ။ နောက်ပြီး သူမမှာ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ပုံမှန်ရင်သားနှစ်ဖက်ပါရှိပြီး ၊ ဆီးခုံအပေါ်ဘက်မှာ နို့သီးခေါင်းပါဝင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ တဲ့ သေးငယ်တဲ့ ရင်သားတစ်စုံလည်း အပိုပါရှိပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဘလန့််ခ်ျဆီမှာ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီး ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်တဲ့ မမျိုးပွားအင်္ဂါအပြည့်အစုံ နှစ်ခု
ရှိပါတယ် ။ (ဟုတ်မဟုတ်မသေချာပေမဲ့) အဲဒီနှစ်ခုလုံးက ပုံမှန်အတိုင်း ကောင်းစွာအာရုံခံစားနိုင်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
သူမရဲ့ တဏှာရာဂ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကတော့ အလွန်သိသာလှပါတယ် ။ သူမဟာ အမျိုးသားများနဲ့ ဆက်ဆံလိုစိတ်ပြင်းပြပြီး၊ သူမရဲ့ လိင်အင်္ဂါနှစ်ခုလုံးကို ဆက်ဆံစေချင်စိတ်ဖြစ်တာပါ တဲ့ …
သူမဟာ ပဲရစ်မြို့တော်ကို ပြောင်းရွေ့သွားပြီးနောက် ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။
မလေးနယ်စပ်မှ မြန်မာ ၂ ဦး အချုပ်ကားအတွင်း သေဆုံး.........
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားမ၀င်နေထိုင်မှုနဲ့ အဖမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာပြည်သား ၆၂ ဦးကို မနေ့က နေရပ်ရင်း ပြန်ပို့ရာမှာ သူတို့ထဲက ၂ ဦး ကားထဲမှာ သေဆုံးသွားပါတယ်။
သေဆုံးသူတွေကတော့ အသက် ၂၅ နဲ့ ၃၆ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး တဦးနဲ့ အမျိုးသား တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
၂ ယောက် သေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်း ကားတစီးထဲ စီးလာတဲ့ လူတွေ သိ၊ မသိ ဆိုတာကိုတော့ သတင်းမှာ ရေးထားတာ မတွေရပါဘူး။
မဲဆောက်ဆေးရုံ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ကားထဲမှာ တင်လာတဲ့ လူတွေကများတယ်၊ ကားစီးတဲ့ အချိန်က ကြာတယ် ဆိုတော့ အပူဒဏ်ကြောင့် ဖျားနာသေဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံမှာ ဖော်ပြထားချက်အရဆိုရင် မြန်မာပြည်သား ၆၂ ဦး ကို ကုန်တင်ကားနဲ့ သယ်ဆောင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:38 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:36 PM No comments:
ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်သန်းကမတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့တာကြောင့်... Published on 20 Apr 2012 by BurmaVJMedia ၁၉၉၃ ခုနှစ်တုန်းဝန်းကျင်က ၁ ဧက ကျပ် ၃ သိန်းတန် လယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ လှော်ကားကျေးရွာ၊ ကွင်းအမှတ် (၅၆၁) ကရင်ချောင်းကွင်း၊ ဦးပိုင် အမှတ် (၇၆/၇၇) မှာ တည်ရှိတဲ့ လယ်မြေ ၁၁ ဧကကို လယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲ (၁) ဧကကျပ်နှစ်သောင်းခွဲနှုန်းနဲ့ အမှတ်(၁၁) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်က ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်သန်းက တပ်ရန်ပုံငွေလို့ပြောပြီး မတရားသိမ်းပိုက်ဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့် လယ်သမားမိသားစုဝင်တွေ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေနေကြရပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:34 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:32 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:30 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 6:28 PM No comments:
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Noda,(ရှေ့ယာဘက်မှ သုံးယောက်မြောက်)၊ မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်(ဝဲဘက် ဒုတိယမြောက်)။
မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ သမိုင်းဝင် ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ဒီကနေ့ စတင်လိုက်ပါပြီ။ ငါးရက်ကြာ ဒီခရီးစဉ်မှာ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတခုနဲ့အတူ ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ နှစ်နိုင်ငံအရေး သီးခြား ဆွေးနွေးတာ တွေကိုလည်း လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်တခုလုံးမှာ အဓိကအကျဆုံး ဖြစ်နိုင်စရာ ကိစ္စကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်ဆပ်ဖို့ရှိတဲ့ ကြွေးမြီတွေကိစ္စနဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေ ပြန်ရဖို့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို ဘန်ကောက်ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံအကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့ ၂၈ နှစ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံ ပထမဆုံးခရီးစဉ်ကို ဒီကနေ့မှာပဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က စတင် လိုက်တာပါ။ မြန်မာသမ္မတရဲ့ ဒီကနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံက အစီအစဉ်တွေ အပါအ၀င် နောက်ရက်တွေရဲ့ အစီအစဉ် တွေကိုတော့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၊ ဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ မဆရု ဆတို့ (Masaru Sato) က ဗွီအိုအေကို အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဒီကနေ့မှာ ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တော့ မရှိပါဘူး။ ဘုရင့်နန်းတော်မှာ လက်ဘက်ရည်ပွဲနဲ့ တည်ခင်း ဧည့်ခံတာရှိပါတယ်။ ဒီညနေပိုင်းမှာ ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ် နိုဒ (Yoshihiko Noda) ရဲ့ ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား ရှိပါမယ်။ ဂျပန်-မဲခေါင် ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို မနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပပါမယ်။ ပြီးတဲ့နောက် ပူးတွဲသတင်း ထုတ်ပြန်ချက် ထွက်ဖို့ ရှိပါ တယ်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့ ဂျပန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနဲ့အတူ လက်မှတ်ထိုးအခမ်းအနားရှိပါတယ်။ အဲဒီ နောက်မှာ ပူးတွဲသတင်း ထုတ်ပြန်ချက် တရပ် ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး ညပိုင်းမှာတော့ ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ်က ညစာနဲ့ တည်ခင်း ဧည့်ခံပါ့မယ်။ အဲဒါက နှစ်နိုင်ငံကြားလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ပါပဲ။” - လို့ မစ္စတာ မဆရုက ပြောပါတယ်။
သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းဖို့ တိုကျိုမြို့က ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ တယ်လီဖုန်း လက်ခံ ပြီး ဖြေဆိုမယ့်သူ မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာသမ္မတ ဂျပန်နိုင်ငံဆီ သွားမယ်ဆိုကတည်းကိုက မြန်မာက ဂျပန်ကို ပြန်ပေးဆပ်ဖို့ရှိနေတဲ့ အကြွေးကိစ္စ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ချေးငွေ၊ ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ နည်းပညာအကူအညီတွေ ပြန်ပေးရေးကိစ္စတွေကို အဓိကထားပြီး သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေကြတာပါ။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်ပေးဆပ်ဖို့ရှိနေတဲ့ ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃,၇၀၀ နီးပါးကို လျှော်ပေးဖို့ မြန်မာသမ္မတက ကြိုးစားမှာဖြစ်သလို ဂျပန်နိုင်ငံဘက် ကလည်း စဉ်းစားနေ တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ဂျပန်သတင်းမီဒီယာတွေမှာ တွေ့နေရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း မစ္စတာမဆရုကတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဖို့ ငြင်းပါတယ်။
“ချေးငွေကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အစီအစဉ်တရပ်ကိုချမှတ်ဖို့ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်နေတာတွေ နောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်နေပါပြီ။ ပြီးပြည့်စုံ ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုမျိုးရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကြေညာဖို့ ကျနော်တို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတဲ့အတွက် အသေးစိတ် တွေကိုတော့ ကျနော် မပြောနိုင်သေး ပါဘူး။ အစီအစဉ်အပြည့်အစုံကို မနက်ဖြန်ထုတ်ပြန်မယ့် ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ကြေညာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” - လို့ မဆရု ဆတို့က ပြောပါတယ်။
နောက်ထပ် ချေးငွေတွေ ထပ်ပေးဖို့အတွက် လက်ရှိကျန်နေသေးတဲ့ အကြွေးကိစ္စ ပြေလည်ရေးက အရေးကြီး သလို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုအနေနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အစစ်အမှန် ခံစားနိုင်ရေးအတွက် ODA လို့ ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်ရပ်ခြား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေ ပြန်ပေးဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်လို့ မဆရု ဆတို့က ဗွီအိုအေကို ပြောထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေ နောက်ပြန်မလှည့်ဘဲ ရှေ့ဆက်သွားအောင် အားပေးဖို့ ဂျပန်အစိုးရ ဘက်က မြန်မာသမ္မတကို ပြောလိမ့်မယ်လို့ ယူဆသူကတော့ မြန်မာစကားရေလည်စွာပြောတတ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသား ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာ ဟောင်းကြီးတဦး ဖြစ်သူ ဦးရွှေဘ ခေါ် မစ္စတာ ဟိဆအို့ တနဘဲ့ (Hisao Tanabe) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ ရှေ့ရှုသွားဖို့ဆိုတာကို အားပေးရင်းနဲ့ တကယ့် ဒီမိုကရေစီအတွက် ပြင်လာပြီဆိုရင်တော့ ဂျပန်အနေနဲ့ စီးပွားရေး အကူအညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်၊ ဂျပန် လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ဗမာပြည်ဈေးကွက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှိတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ချင်နေတဲ့စိတ် ပြင်းပျနေတယ်ဆိုတာမျိုးကို ဦးသိန်းစိန်ကို ဂျပန်ဘက်က ပြောပြဖို့ ရှိမယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။”
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အစဉ်အလာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ထောက်ခံအားပေးပြီး အကူအညီတွေ တောက်လျှောက် ပေးလာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို အပြောင်း အလဲတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ အဲဒီအစဉ်အလာကို ဆက်ထိန်းသိမ်းပြီး အကူအညီတွေ အပြည့်အ၀ ပြန်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပဲ ဆိုရမှာပါခင်ဗျား။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 2:09 AM No comments:
Apr. 21 - Japan has wiped away $3.7 billion in debt owed by Myanmar, part of efforts to help the impoverished southeast Asian country make the transition to democracy. Andrew Raven reports. ( Transcript )
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 2:00 AM No comments:
အငြိမ်းစားမြို့ နယ်မှူးသားဖြစ်သူမှ ဥပဒေမဲ့ပြုမူခြင်း
ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်တွင် ကွမ်းယာေ၇ာင်းနေသူ အမျိုးသမီးအား အငြိမ်းစားမြို့နယ်မှူး၏ သားဖြစ်သူ ဘကျော်(ခ)ဦးကျော်ဇင် ၉ မိုင် ဗိုလ်ဥာဏလမ်းတွင် နေထိုင်သူ ကားနံပါတ် လ/၈၇၅၅ ဆိုသူမှ ဆိုင်ရှေ့တွင် ကားရပ်ပြီး ကွမ်းယာ တယာပေးဟု မောက်မာစွာ တောင်းပါသည်..
ကျွန်မမှာ ဗိုက်ခွဲ၍ မွေးဖွားထားသော မိခင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်.. မီးဖွားထားသည်မှာ ( ၃၃ ) ၇က်ပဲ အကြာပဲ ရှိပါသေးသည်..ထို့ကြောင့် ကွမ်းယာအား ထမပေးနိုင်ခဲ့ပါ.. ထိုသို့ပေး၍ ကားပေါ်မှ ပြေးဆင်းလာပြီး ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆို၍ ၇င်ဘတ်အား ဖိထားပြီး ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲ ပါးနားပြင်းထန်စွာ ဘယ်ပြန် ညာပြန်၇ိုက်ပါသည်....ပျဉ်ချောင်းဖြင့် လက်ကို ၂ ချက် ခါးကို ၂ ချက် တင်ပါးကို ၁ ချက်၇ိုက် ပါသည်...
အပြည့်အစုံအား ပေးပို့ လာသောစာတွင် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်...
ကျောက်ကြီးမြို့ KNU ဆက်ဆံရေးရုံး အကြောင်းသိကောင်းစရာ (တပ်မဟာ ၃ ရဲဘော်တစ်ဦးရင်ဖွင့်စကား)
အီးမေးမှ လက်ခံရရှိတဲ့စာကို မူရင်းအတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ PDFဖိုင်အတွင်းအကြောင်းအရာတွေဟာ သတင်းသမားအရေးအသားမဟုတ်ပေမယ့် ခံစားချက်နဲ့ ရေးထားသောရဲဘော်တစ်ဦး၏ စာဖြင့်သည့်အတွက် ဖတ်သင့်ပါသည်။ xxxxxxxxxxxxxxx
ကျွန်မ ကို ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းက ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တုန်း သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအပေါ်အမြင်နဲ့ (ခေအဲန်ယူ)ဆက်ဆံရေးရုံး ကျောက်ကြီးမှာဖွင့်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီး သတင်းဌာနကို ပို့ခိုင်းပါတယ်။ တကယ်လို့များ သောသီခိုအနေဖြင့် သောသီခိုရဲ့ ဘလော့ မူနဲ့ တိုက်ဆိုင်မယ် ကရင်လူမျိုးစာဖတ်သူများနဲ့ ကရင်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို တစ်ခုခု အကျိုးပြုမယ်လို့ ထင်ရင် ဖော်ပြပေးစေချင်ပါသည်။ စာရေးကျင့် မရှိသဖြင့် စာချောအောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:46 AM No comments:
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ရုံး(ကြည်း)၊ တပ်မတော်စစ်ဘက်ရေးရာလှုံခြုံရေးအရာရှိချူပ်ရုံး မှတ်တမ်းစာအုပ် (လှို့ ဝှက်)
ကဲကြည့်ကြ.. မမြင်သေးရင် ပါဝါအားအမြင့်ဆုံး မျက်မှန်ရှာပြီးမြင်အောင်ကြည့်။ ဗမာစာနားမလည်ရင် နားလည်သူကို ဖတ်ခိုင်းပြီးရှင်းပြခိုင်း.......
ခွေးကို လူလိုဆက်ဆံတာ ရာဇ၀င်ရိုင်းကြလိမ့်မယ်။ စစ်ပြန်တိုက်ဒါက ပိုပြီးတော့ သိက္ခာရှိအုံးမယ်လို့မှတ်ချက်ပေးလိုတယ်....
ဓါတ်ပုံ - ဖေ့ဘွတ်မှရယူသည်။
အကြောင်းအရာ။ KNU အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုများ
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:36 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:32 AM No comments:
အမှတ်တရများ KNL japan 8-10-2007 ဂျပန်သတင်းထောက် နာဂါအိ ခန်းဂျိ ဈာပနအခမ်းအနား
KNL japan 8-10-2007 ဂျပန်သတင်းထောက် နာဂါအိ ခန်းဂျိ ဈာပနအခမ်းအနား
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:29 AM No comments:
KNU,OKOJ,KNL JAPAN,Karen New Year metting
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 1:26 AM No comments: